သောသီခို: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ကို စွန့် ခွာသင့်ပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ကို စွန့် ခွာသင့်ပြီ။
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းက မိမိ၏ ဘေးတွင်ကပ်ထိုင်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ညွှန်ပြ ကာ အတူ လက်တွဲ အလုပ်လုပ်နေကြပြီဟု ဆိုလျှက် အမျိုးသားစည်းလုံးမှု ရနေသယောင် ဟစ်ကြွေးခဲ့သည့် ဤသို့သောအချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ကို စွန့် ခွာသင့်ပြီ ဟု တပ်လှန့် နိုးလိုက်သံ ကြားလိုက်ရသောအခါ စာဖတ်သူ အံ့သြကောင်း အံ့သြပါမည်။ အကြောင်းမည်သို့ ဆိုသည်ကို ရှင်းပါအံ့။
ရှေ့ ခြေနှစ်လှမ်းတိုးရန် နောက်ခြေတလှမ်းပြန်ဆုတ် (One step backward, two steps forward) ဟူသော ဆိုရိုးစကားရှိသည်။ လူသည် ဘ၀ခြေလှမ်းများ လှမ်းရာ၌ တခါတရံတွင် မလှမ်းသင့် သောနေရာကို လှမ်းမိ သဖြင့် ကျွံသွားတတ်သည်။ ဤသည်ကို မှန်ကန်စွာသိမြင်လာပါက လမ်း ကြောင်း မှန်ကို ပြန်လည်လျှောက်လှမ်းရန် မိမိခြေတလှမ်းကို အမြန် ဆုံးပြန်ဆုတ်ရပါမည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေအောက်တွင် ခေါင်းလျှိုးကာ စစ်အစိုးရတည်ဆောက်ထားခဲ့ သည့် လွှတ်တော်အတွင်း ၀င် ရောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံရေးအရသာမက ဥပဒေအရပါ ခြေ လှမ်းကြီး တလှမ်းကျွံသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမြန်ဆုံးပြန်ဆုတ်ရန်လိုပါမည်။ သို့ မဟုတ်လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သည် ပင်လယ်ထဲတွင် မျောနေသည့် ဆင်သေကောင်ကြီးအပေါ်တွင် စီးနင်းလိုက်ပါသွားရင်း ဆင်သေကောင်နှင့်အတူ ရေထဲမြုပ်သွားမည့် ငှက်ငယ်ကလေး၏ ဘ၀နှင့် အလားတူသွားမှာ စိုးရိမ်မိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် စစ် အာ ဏာရှင်စနစ်ကို စနစ်တကျ အသက်သွင်းထားသော ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေသည် ဆင်သေကောင်ပုပ်ကြီး ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှတ်တော်အတွင်း ၀င်ရောက်သွားခဲ့သည့် တနှစ်ကျော်ကာလ ဖြတ် သန်းမှု ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့ လိုပါမည်။ သူမ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်စဉ်က ကြွေးကြော်ခဲ့သည့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းစံထားချက်များဖြင့် သုံးသပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဟူသော စကားလုံးကို ကြိမ်ဖန်များ စွာ ပြော နေသော်လည်း ဤသည်မှာ မည်သို့ သော အဓိပ္ပါယ်ရှိကြောင်းကို လူထုအားတိတိကျကျ ရှင်းလင်းမှု မပြုခဲ့ပါ။စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ပြဌာန်းထားသော မတရားဥပဒေများကို ဆက်လက် လိုက်နာရေးနှင့် လက်ရှိ လွှတ်တော်က ပြဌာန်း နေသည့် မတရား ဥပဒေများ အောက်တွင်လူထု တရပ်လုံး ငြိမ်ဝပ်စွာ နေထိုင်ရေးအား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဟူသကဲ့ သို့ဖန်တည်းခံနေရသည်။ ဤသည်ကို ဒေါ် အောင် ဆန်း စုကြည်ကိုယ်တိုင်က လက်ခံလိုက်နာ ပံ့ပိုး ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေ သည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ နိုင်ငံတကာစံထားချက်များနှင့် ကိုက်ညီရုံသာမက ပြည်တွင်း လိုအပ်ချက် ကိုပါ ဖြည့်ဆည်းနိုင် မည့် ဖွင့်ဆိုချက် တခုခုအား တိတိကျကျကိုင်စွဲ မထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဥပဒေ အထောက်အကူပြုကွန်ရက် အနေဖြင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဟူသော စကားရပ်ကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ဆိုသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟူသမျှကို ထိရောက်စွာဖေါ်ထုတ်ပြီး အပြစ်ပေးရေး၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူများအနေဖြင့်
လွတ်လပ်၊ ဘက်မလိုက်သော တရားရုံးများ၌အရေးယူ တိုင်တန်းတရားစွဲခွင့်ရရှိရေး နှင့် ၄င်းတို့၏ ဘ၀နစ်နာ
ဆုံးရှုံးခဲ့မှုအတွက် ပြန်လည်ကုစားပေးနိုင်ရေး၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူရော စွပ်စွဲခံရသူများအတွက်ပါ မျှတသော
တရားခွင် အခြေအနေ (Fair Trial) ရရှိရေး အခြေခံများအပေါ်တွင် တရားမျှတသော ဥပဒေများရှေ့မှောက်၌
လူတိုင်း တန်းတူရေး နှင့် တန်းတူ အကာအကွယ် ရရှိရေး ဖြစ်သည်။
ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ အနှစ်သာရကို သေချာစွာဆုပ်ကိုင်မိပါမှ လူထုအတွက် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ခံစားရရှိနိုင်ပါ မည်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး၏ အနှစ်သာရကို ဆုပ်ကိုင်ရန် နှင့် လက်တွေ့ ဖေါ်ဆောင်ရန် မကြိုးစားဘဲ ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဟူသော စကားရပ် အား အကြိမ်ပေါင်း ကုဋေမျှပင် ရွတ်ဆိုစေဦး။ ဟောရင်းသာ ပြန်လွန်တော်မူသွားပါမည်။ လူထုသည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ခံစားနိုင်ဘွယ်မရှိပါ။ အထက်ပါ ဥပဒေစိုးမိုးရေးစံထားချက်နှင့် တိုင်းတာမည် ဆိုပါက လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ အခြေခံလူထုသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆုံးရှုံးခြင်း၏ ဟိုမှာဘက်ကမ်းသို့ လွန်နေကြောင်း တွေ့ ရပါမည်။
ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟူသော စကားရပ်ကဲ့သို့ ပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမျိုးသားပြန်လည်သင့် မြတ် ရေး ဟူသည်ကို အကြိမ်ပေါင်း တထောင်မက ပြောခဲ့ပြီးသော်လည်း ဤသည်မှာ မည်သည့် အရာဖြစ်ကြောင်း ဘယ်တုံးက မျှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုမပြခဲ့ပါ။ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်အား ပုဂ္ဂိုလ်အရ ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသော လူထု အများစုကြီးမှာလည်း မည်သည်မှန်းမသိသော အရာ နောက်သို့ တောက်လျှောက်လိုက်နေခဲ့ကြသည်။ သို့ ဖြစ်၍ လက် တွေ့ တွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဟူသည်မှာ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ကျူးလွန်ခဲ့သည့်ပြစ်မှုကြီးများအား ရေငုံနုတ်ပိတ်ရေး နှင့် လက်ရှိကျူးလွန်နေမှုများအပေါ်တွင်လည်း အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားရေး ဖြစ်နေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မီတီ ဥက္ကဌနေရာတွင် ယူထားပါလျှက်ဥပဒေစိုးမိုး ရေး ကို သူမကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် ဥပက္ခာပြုလျှက်ရှိသည်။ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က ကျူးလွန်ခဲ့သော နိုင်ငံတကာအဆင့် ရှိ ပြစ်မှုကြီးများအား ဖေါ်ထုတ်အရေးယူရန် ကြိုးစားဘို့ ဝေးရုံသာမက မျက်မှောက်မှာပင် ရခိုင်ပဋိပက္ခတွင်လည်းကောင်း၊ မိတ္ထီလာ အဓိကရုဏ်းတွင် လည်းကောင်း၊ အစိုးရအာဏာပိုင် များကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကျူးလွန်သည့် အထောက် အထား များတွေ့ ရ၊ နိုင်ငံတကာ လူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အစည်းများကလည်း ထောက်ပြကြပါလျှက် မမြင်ယောင် မကြားယောင် ပြုခဲ့သည်။ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပွဲများအတွင်း နိုင်ငံတကာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုကြီးများကျူးလွန်ခံခဲ့ရ သည့်ထောင်သောင်း ချီသော ကချင်လူထုများသည် ယနေ့ တိုင် ဒုက္ခ သည်စခန်းများအတွင်း ရှိနေကြဆဲဖြစ်သော် လည်း ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံမှ မည်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမျှ မပြု။
လက်ပံတောင်းတောင်တွင် သံဃာတော်များမှာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် ဒဏ်ရာများရခဲ့သည်ကို မည်သူမျှ မငြင်းနိုင်။ ဆင်ကြီးတကောင်လုံး တွေ့ ရပါလျှက်ဆင်ခြေရာရှာသည့် အလုပ်ကို သူမ လုပ်ခဲ့သည်။ မီးခိုးဗုံးပါဟု ပြောင် ငြင်းခဲ့သည်။ မည်သည့်လက်နက်မျှ ကိုင်စွဲခြင်းမရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသော သံဃာတော်များ ညဘက် ကြိမ်းစက် နေသည့် အချိန်တွင် အကြမ်းဘက်ဝင်ရောက်စီးနင်းကာ မီးလောင်ဗုံးနှင့်ဖြိုခွဲခဲ့ခြင်းမှာရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် သံဃာတော်များမှာ မျက်စိပျက်သူပျက်၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့ ယွင်းသူချို့ ယွင်း၊ တကိုယ်လုံးမြင် မကောင်းအောင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်သူဖြစ်နှင့် ဘ၀နစ်နာပျက်စီးကြရသည်။
ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တကယ်တန်း ဖေါ်ဆောင်လိုပါက ဤပြစ်မှုကြီးအပေါ် အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် အရေးယူ ဆောင် ရွက် ရပါ မည်။ ပထမအဆင့်မှာ မည်သူပင် ကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေ ဤ ပြစ်မှု ကို ဖေါ်ထုတ် အရေးယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ အဆင့်မှာ ဆိုးဝါးစွာ ဘ၀နစ်နာပျက်စီးသွားခဲ့ရသော သံဃာတော်များအား တဘ၀လုံးစာအတွက် ထိုက်ထိုက် တန်တန် လျော်ကြေးငွေ အမြောက်အများလည်း ပေးအပ်ရပါမည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် ဘ၀နစ်နာပျက်စီး ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသော သံဃာတော်များအတွက် ဘာတခုမျှ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင် ကျဉ်းမပေးခဲ့ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သံဃာတော်များအား ရှိခိုးနေသည့်ပုံများကို မကြာခဏ တွေ့ ရသည်။ ကြည်ညို ဘွယ်ကောင်းပါသည်။ သို့ ရာတွင် အသွင်သဏ္ဍာန်အရ သံဃာကို ရှိခိုးနေသော်လည်း အနှစ်သာရအားဖြင့်မူ အာဏာ ကိုသာ ရှိခိုးနေသည်ဟု ရှုမြင်မိသည်။ သူမ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဥက္ကဌဖြစ်နေသည့် အချိန်တွင်ဤပြစ်မှုကြီး အပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် ဒေသခံ လက်ပံတောင်းတောင် လူထု၏တောင်းဆိုမှုကို လည်း ခပ်တင်းတင်းပင် လျှစ်လျှူ ရှုထားဆဲဖြစ်သည်။ “ငါတို့ မှာ မြေလည်းဆုံး၊ အောင်ဆန်းစုကြည်လဲ ဆုံးပါပေါ့ လား” ဟု အော်မြီရင်း ရင်အုံကို တဘုံး ဘုံး ထုကာ ငိုကြွေးခဲ့သော လက်ပံတောင်းဒေသခံ အဖွားအိုတဦး၏ ရင်နင့်ဘွယ် ရင်ဖွင့်သံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မကြားယောင် ပြုခဲ့ပြီ။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အရေးယူရန်မကြိုးစားခဲ့ရုံသာမက ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဘက်မှ မည်သူကမျှ သူမအား မငှား ပါဘဲလျှက်နှင့် ရှေ့နေပင်လိုက်ပေးခဲ့သည်။ “သံသယ အကျိုးကို ခံစားခွင့်ပေးရမယ်။” ဟူသော စကားရပ်ကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ သုံးစွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းစကားရပ်အား မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင် အဓိက သုံးစွဲရသည်ကိုသူမ လေ့လာခဲ့ဘူးပုံမရ။ “တရားရုံးက ပြစ်မှုထင်ရှားမစီရင်မခြင်း စွပ်စွဲခံရသူအပေါ် အပြစ်ကင်းသူ အဖြစ် မှတ်ယူရမည်။” ဟူသည့်မူ နှင့် နားလည်မှုလွဲကာ သုံးစွဲနေလေသလားဟူ၍လည်း စဉ်းစားမိသည်။
ပြစ်မှု ဆိုင်ရာမှုခင်းတခုခုကို လက်ခံပြီးနောက် အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးစီရင်နေစဉ်အတွင်းတွင် “သံသယ အကျိုး ခံစားခွင့်”  ဟူသည်ကို တရားရုံးက စွပ်စွဲခံရသူအပေါ် အဓိကအားဖြင့် လက်ခံစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ သံဃာတော်များ အား မီးလောင်ဗုံးနှင့်ပစ်ကာ ရာဇ၀တ်မှုကြီးတရပ် ကြီးကြီးမားမားကျူးလွန်ခဲ့သည့် အာဏာပိုင်များအား ဖမ်းဆီးအရေး
ယူ ရုံးတင်စစ်ဆေးနေသည့် အချိန်တွင်ဖြစ်ပါက “သံသယ အကျိုး ခံစားခွင့်” ကို ၄င်းတို့ အပေါ်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ယခုမူ သံဃာတော်များအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုကြီးနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ မည်သည့်ရဲ သို့ မဟုတ် အာဏာပိုင်ကိုမျှဖမ်းဆီးအရေး ယူခြင်းမပြု၊ ရုံးတင်တရားစွဲဆိုသည့် အဆင့်လည်းမရောက်၊ သူမကိုယ်တိုင်သည် တရားသူကြီး သော်လည်းကောင်း တရားရုံးသော်လည်းကောင်းလဲ မဟုတ်ပါဘဲလျှက် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ အာဏာပိုင်များဘက်မှ ကာကွယ်ကာ “သံသယ အကျိုး ခံစားခွင့်” ဟူသောစကားရပ်အား တတွတ်တွတ် ရွတ်ဆိုခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအာဏာပိုင်များကို အရေးယူခြင်းလုံးဝမရှိသဖြင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးပျက်ခြင်းမှာတပြည်လုံးအနှံ့ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဦးရွှေမန်းတို့ အဖွဲ့ သားများနှင့် တွဲကာ ရွှင်လန်းမြူးတူးစွာနှင့် လွှတ် တော် အတွင်းတွင် ကွေးနေအောင် ကနေသည့် အချိန်တွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးပျက်သည့်အောက်၌ တိုင်းရင်းသားအခြေခံ လူထု အမြောက်အများမှာ ဒူးနှင့်မျက်ရည် သုတ်နေကြရသည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်အခြေခံ ဥပဒေအမွေဆိုးကို ချန်ထားခဲ့မည်လား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အသက်ခုနှစ်ဆယ်ပိုင်းအတွင်း ၀င်ရောက် အရွယ်ထောက်လာခဲ့ပြီဖြစ် သည်။ ဇရာ၏သဘောအရ ကွေးသောလက် မဆန့် ခင်၊ ဆန့် သောလက် မကွေးခင် ဖြစ်သည်။ မိမိအသက်ထင်ရှားရှိ နေစဉ် အတွင်း နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါပြီ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သံကွန်ချာအတွင်းသို့ပြည်သူလူထုကို ခေါ်သွင်းသွားပြီး ရုန်းထွက်ရ လွန်စွာခက်ခဲသည့် အနေအထားမျိုးဖြင့်မထား ခဲ့သင့်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ဘယ်သူဘာပြောပြော ကိုယ်မှန်သည်ထင်ရာ လုပ်တတ်သည့် ခေါင်းဆောင်တဦး
ဖြစ်သည်ကို သတိပြုမိသည်။ မှန်သည့် လမ်းကို လျှောက်မိသည့် အချိန်၌ ဤဥာဉ်မျိုးမှာကောင်းကျိုးပြုတတ်သော် လည်း မှားသည့်လမ်းကို လျှောက်မိသွားလျှင် ဆိုးကျိုးကိုသာ ပေးစွမ်းနိုင်ပါမည်။
လမ်းကြောင်းမှားကို လျှောက်လှမ်းနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အသက်သွင်းထားသည့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံလမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းနေခြင်း မှာ မှားနေပြီဟု စာရေးသူအနေဖြင့် အတိအကျသုံးသပ်သည်။ အောက်ပါအကြောင်းအချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
(၁) ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကို လက်ခံပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်၊ ၄င်းအရတည်ဆောက်ထားသော တိုင်းပြည်အဆောက် အအုံများတွင် ပါဝင်ထမ်းဆောင်သည့်နည်းမျှဖြင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ၏ အခြေခံကျသော ကျောရိုးများကို ပြင်နိုင်မည် မဟုတ်။
(အခြေခံကျသောကျောရိုးများဆိုသည်မှာ သာဓက အားဖြင့် ပြည်ထောင်စုဖွဲ့ စည်းရာတွင် တိုင်းရင်းသားများ လိုလားသည့်အတိုင်း တိုင်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးများကို ဖြုတ်၍ ပြည်ထောင်စုအား အမျိုးသားပြည်နယ်များ ဖြင့်သာ ဖွဲ့ စည်းစေခြင်း၊ အတုအယောင် သမ္မတ စနစ်ကို ကျင့်သုံး ခြင်း မှနေ ၍ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်သည့် ပါလီမန် စနစ်သို့ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခြင်း၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးကောင်စီ တည်ရှိမှုနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးသီးခြားတည်ရှိမှုတို့ ကိုဖြုတ်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်များနှင့် ဖွဲ့ စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးတရားသူကြီးများအား လွတ်လပ်သည့် တရားရေးကော်မရှင် သို့ မဟုတ် တရား စီရင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ကော်မရှင်က ခန့်အပ်သည့် စနစ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် တရားစီရင် ရေး လွတ်လပ်မှုကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ န၀တ နှင့် နအဖ စစ်အစိုး၇များ က ကိုယ့်ကိုယ်ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ပေးထားသည့် ပုဒ်မ ၄၄၅ ကိုဖြုတ်ခြင်း၊ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များ၌စစ်ဗိုလ်တမတ်သားပါဝင်မှုကို ဖြုတ်ခြင်း)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်အတွင်းရောက်သွားသည်မှာ တနှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း အခြေခံကျ သော ကျောရိုး တခုတလေကိုမျှ ပြင်နိုင်မည့် အလားအလာ မတွေ့ ရ။ အဆိုပါ အခြေခံကျသော ကျောရိုးများအား ပြင် သွားမည်ဟူ၍ပင် သူမထံမှ တိတိကျကျ စကားထွက်သံမကြားရ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီသာမကနောင်လာမည့် မည်သည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင်မျှ ၄င်းအခြေခံကျောရိုးများကို ပြင်ဆင်ပြီး စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည် ဆောက်နိုင်မည် မဟုတ်။
(၂) ဆန္ဒရှိလျှင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကို တလအတွင်းပြင်နိုင်သည် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြွေးကြော်နေခြင်း မှာ သင်္ကြန် အမြှောက်သာဖြစ်သည်။ သူမ အိမ်အချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခါစတွင် ပင်လုံကဲ့သို့ အလားတူသော ညီလာခံ ကြီး တခုကျင်းပသွားမည်ဟူ၍ တိုင်းသိပြည်သိ ကြေငြာခဲ့ဘူးသည်။ စာရေးသူနှင့် သိကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့သော ကရင်နီ အမျိုး သား တိုးတက်ရေးပါတီ (ကေအင်န်ပီပီ) ၏ ဥက္ကဌကြီးဖြစ်ခဲ့သော ဦးထဲဘူးဖဲ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ခေါ် ယူမည့် ပင်လုံကဲ့သို့ သော ညီလာခံကြီးကို တက်လိုကြောင်း လူသိရှင်ကြားရေဒီယိုမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခု ဥက္ကဌ ကြီး မှာ ကွယ်လွန်သွားရှာပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပင်လုံညီလာခံမှာ လေထဲတွင် ပျောက်ကွယ်နေသည်မှာ ကြာပါပြီ။ ဥက္ကဌကြီးသည် မည်သည့်အခါတွင်မျှ တက်ခွင့်ရလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်မရစေရန် ကန့် သတ်ထားချက်မှာ ဖွဲ့ စည်းပုံ၏ အခြေခံ ကျောရိုးမဟုတ်သည်မှာ ရာနုန်းပြည့်သေချာသည်။ မည်သည့် အခြေခံကျောရိုးကိုမျှ ပြင်မပေးဘဲ ဥပဒေမျက်လှည့်ပြ သည့်အနေဖြင့် အဆိုပါကန့် သတ်ထားချက်အား ပြင်ဆင်ပေးခြင်းမျိုး လုပ်ကောင်းလုပ်လာနိုင်သည်။ ဤသည်မှာလူထု တရပ်လုံးအတွက် ဆင်ထားသည့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ ထောင်ခြောက်ပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းမှလွဲ၍ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ၏ အခြေခံကျောရိုးများအနက် တခုတလေမျှကိုပင် တလ အတွင်း ပြင်ဆင်ရန်မည်သို့ မျှမဖြစ်နိုင်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် တာဝန်မဲ့စကားများကိုအဘယ်ကြောင့်ပြောဆို နေသနည်း။ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်အတွင်းအတင်း သွင်းနေသောအဖြစ်မှ နိုးထသင့်ပါပြီ။
(၃) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်အတွင်း ၀င်သွားခဲ့သည်မှာ တနှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းမည်သည့် မတရားသည့် ဥပဒေ တခုတလေကို မျှ ဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသေး။ ပြောင်းပြန်ပင် မတရားသည့် ဥပဒေ အသစ်များ ဆက်လက်ပြဌာန်းနေသည်ကို ကန့် ကွက်ဖေါ်ပင် မရဘဲ ထိုင်ပြီး လက်ခုပ်တီးပေးနေသည့် အဆင့် ဖြစ်နေသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်သည့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်က ပုံနှိပ်ခြင်း နှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း ဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ ယင်း၏ အခန်း (၃) ပုဒ်မ (၇) အရ ပုံနှိပ်ခြင်း နှင့် ထုတ်ဝေခြင်းကိုတားမြစ်သည့် စည်းကမ်းငါးရပ်အနက် တရပ်မှာ အောက်ပါပြဌာန်းချက် ဖြစ်သည်။
(င) ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နှင့် အခြားတည်ဆဲ ဥပဒေများအရ ပြဌာန်းချက်များကို ဆန့် ကျင်ဖေါက်
ဖျက်ရာရောက်သည့် အရေးအသားများ၊ စာများ ထုတ်ဝေခြင်း။
ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်လိုလျှင်ယင်းအပေါ်တွင် ဘက်စုံဒေါင့်စုံမှ သုံးသပ်ချက်ပေါင်းများစွာ ရေးသားပြုစုပြီး အများပြည်သူလေ့လာခွင့်ရစေရန် စာအုပ်စာတမ်းများ ထုတ်ဝေရပါမည်။ အထက်ပါပြဌာန်းချက်အရ ရှင်းနေသည်မှာ ဤဥပဒေသာ အတည်ဖြစ်သွားပါက၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ဆန့် ကျင်ဝေဖန်ရေးသားထား သည့်စာအုပ်များ၊ စာစောင်များအား ထုတ်ဝေရဲမည့်သူရှိတော့မည် မဟုတ်ခြင်းပင်။ အရဲစွန့် ထုတ်ဝေမည့်သူရှိဦး တော့။ စိုးတထိတ်ထိတ် ရှိနေပါမည်။ ဒီမိုကရေစီ၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သည့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသား ခွင့်၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့် အား အကြီးအကျယ် ထိပါးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤမျှ ဆိုးဝါးသည့် ဥပဒေကို ဒေါ်အောင် ဆန်းစု ကြည်သည် အဘယ်ကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် မကန့် ကွက်ဘဲ အတည်ပြုပေးလိုက်ပါသနည်း။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၂၉)ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းလိုက်သည့် တရားရုံးများကိုမထီမဲ့မြင်ပြုမှု ဥပဒေ သည်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ၁၉၇၁ ခုနှစ်က ပြဌာန်း ထားသည့် အလားတူဥပဒေမှ တိုက်ရိုက် ပုံတူကူးချထားကြောင်းတွေ့ ရ သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဘယ် ကြောင့် မကန့် ကွက်ခဲ့သနည်း။ အားလုံးနီးပါးကို ကူးချထားသော်လည်း အိန္ဒိယ ဥပဒေတွင်မပါဘဲ မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေ တွင် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားသည့် အောက်ပါ တားမြစ် ကန့် သတ်ချက်မှာ သတင်းမီဒီယာများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်ကို တိုက်ရိုက်ထိပါး လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ရန်ရှိသော အချက်များကို တစုံတရာ အဆုံးအဖြတ်မပေးရသေးမီ
ကြိုတင်ဝေဖန် ပြောဆိုခြင်း၊ ရေးသားဖေါ်ပြခြင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဖြန့် ချီခြင်း။
အဆိုပါ ပြဌာန်းချက်အပေါ် ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက် Legal Aid Network (L.A.N) ၏ ကန့် ကွက် ဝေဘန်ချက်အား လွတ်လပ်သော အာရှအသံ ရေဒီယိုက ဇူလိုင်လ သုံးဆယ်ရက်နေ့ တွင် အသံလွှင့်ခဲ့သည်။ ဤလင့်ခ် တွင် ပြန်လည်နားဆင်နိုင်ပါသည်။
အခြားအချက်များအပြင် ယင်းကန့် ကွက်ချက်ကိုလည်း ရည်ညွှန်း၍ ဘီဘီစီ သတင်းဌာနကသြဂုတ်လ (၂ ) ရက်နေ့ တွင်ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဦးဆောင်သည့် ဥပဒေစိုမိုးရေးကော်မတီဝင် အမတ်တဦးလဲဖြစ်၊ ရှေ့နေကြီး တဦးလည်း ဖြစ်သူ ဦးသိန်းညွန့်အား မေးမြန်းခဲ့ရာ ၄င်းက ဤဥပဒေတွင်ဖေါ်ပြထားသည့်ကင်းလွတ်ချက်များသည် လိုသလိုဆွဲ၍ရသဖြင့် သတင်းမီဒီယာများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း ဖြင့် ၀န်ခံဖြေဆိုသွားခဲ့ရသည်။ ဦးသိန်းညွန့် ၏ အင်တာဗျူးကို ဤလင့်ခ်တွင် နားဆင်ပါ။ https://docs.google.com/file/d/0B75-mXONmTooZV9yNnZEemdwTEU/edit?usp=sharing
ဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မီတီ ဥက္ကဌတာဝန်ယူထားသော ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သတင်းမီဒီယာများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်အပါအ၀င် လူထု၏ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့် နှင့် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများအားပိတ် ဆို့ သည့် ဖေါက်ပြန်သည့် ဥပဒေများ၊ မတရားသည့် ဥပဒေများ အား အဘယ်ကြောင့် ဟောတခု၊ ဟောတခု ထိုင်ပြီး အတည်ပြုပေးနေသနည်း။ လွှတ်တော်တွင် မိမိပါတီက လူများစု နေရာ မရသော်လည်း အမတ်တဦးချင်းအနေ အထား အရပင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့် ကွက်ရန်၊ မတရားဥပဒေမှန်သမျှကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့့် ကျင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ လွှတ်တော်ပြင်ပမှ လူထု အား ကို ရယူ၍ မတရားပြဌာန်းချက်မှန်သမျှကိုတိုက်ဖျက်ဘို့ ကြိုးစားသင့်သည်။ အဘယ် ကြောင့် ငြိမ်ထိုင်နေသနည်း။ လွှတ်တော်တက်ရောက်နေသည့် လူထုခေါင်းဆောင်၏ တာဝန်ခံမှုသည် အဘယ်နည်း။ ချုပ်ချယ်ကန့် သတ် ပိတ်ပင်ထားသည့် မတရားဥပဒေများအောက်တွင် ဒီမိုကရေစီရရှိမည်ဟူ၍ များ စိတ်ကူးယဉ် နေပါ သလား။ အခြားနိုင်ငံမှ ဥပဒေကို ပုံတူကူးချ၊ စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း သစ်များ လိုခြင်သည့် ဖိနှိပ်သော ပြဌာန်းချက် များ ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဥပဒေပြုသည်ဟု ကြွေးကြော်လုပ်ဆောင်နေသော လွှတ်တော်တွင် မိမိကိုယ်တိုင် လည်း ဘာမျှ မလုပ်နိုင်ပါ ဘဲလျှက် ဆက်ထိုင်နေခြင်းသည် လူထုအတွက်အကျိုးရှိပါမည်လား။
သူမသည်၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်း ပုံ လမ်းကြောင်းတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စီးမျောခံရင်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ ဥပဒေ သံကွန်ချာကြီး ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက် ရာ၌ ပံ့ပိုးပေးရသည့် ဘ၀သို့ ကျရောက်သွားခြင်းမှာ များစွာ ၀မ်းနည်း ဘွယ်ပင်။ ဤသည်မှ ရုန်းထွက်သင့်ပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ကို စွန့် ခွာသင့်ပါပြီ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကို ကန့် ကွက်၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲရန် တောင်းဆိုသော လူထုအသံများ၊ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အသက်သွင်းထားသည့် ဖွဲ့ စည်းပုံအဖြစ်၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအား ရည်ညွှန်းလျှက်တိုက်ပွဲ မပြီးဆုံးသေး ကြောင်းဖြင့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂဥက္ကဌ ကိုကျော်ကိုကိုက ဇူလိုင်လ (၂ ) ရက်နေ့က ရဲရဲတောက်မြွက်ကြားသွားခဲ့သည်။ ၄င်းသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ၏ အတွင်းသရုပ် အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းမြင်တတ် သည့် အပြင် မြင်သည့်အတိုင်း တည့်တည့်ထုတ်ဖေါ်ပြော ရဲသူဖြစ်သည်။ လူငယ်လေးမျှဖြစ်သော ကိုကျော်ကိုကို နှင့် ဗကသ ခေါင်းဆောင်များသည် ယနေ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံလမ်းကြောင်းတွင် စီးမျောနေကြသော လူကြီးနိုင်ငံရေး သမား များအတွက် စံထားစရာသဖွယ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကွန်ရက်ကလည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံမှာ ပြင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလက်ခံရုံသာမက ပြင် ဆင်နိုင်သည့် ပြဌာန်းချက် ပုဒ်မ ၄၃၆ အရဆိုပါက လက်တွေ့ ပြင်၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့ ဖြစ်၍ မပြင်တော့ဘဲ အသစ်ရေးဆွဲသင့်ကြောင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် အချိန် ကုန်သက်သာ မည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ကထဲကပင် ထုတ်ဖေါ်ခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက် က လည်း ပြည့်စုံသောဥပဒေ စိုးမိုး ရေးမူများအပေါ်တွင်ပြုစုထားသည့် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေသစ် တရပ် ပေါ်ပေါက် အတည်ပြုကျင့်သုံးသွား ရန် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၅) ရက်နေ့ တွင် ဘဲလ်ဂရိတ် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ကာ တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဤလင့်ခ်တွင် ရှုပါ။ https://docs.google.com/file/d/0B5uXEhFP_PLIUDhveGRoOVYzRUk/edit?usp=sharing
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ မှ ၃၀ ရက်နေ့ အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းကြီးများအားလုံးနှင့် လက်နက်မကိုင်သည့် အခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းများပါတက် ခဲ့သည့် ညီလာခံကြီးမှ နေ၍ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကို လက်မခံနိုင် ကြောင်း၊ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်းမှာပင် အပြီး ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ အပြင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တရပ်တည်ထောင်ရန် တောင်းဆိုကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း သစ်များအား ကြီးကြီးမားမား စိမ်ခေါ်လိုက် ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ ရာတွင် ၄င်းတို့ သာ မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကို မကျင့်သုံးဘဲ ရိုးသားစွာနားလည်မှု ထားရှိမည် ဆိုပါက စစ်မှန်သည့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေး လမ်းကြောင်း မှန်အနေဖြင့် လက်ခံသင့်သည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းကြီးများတွင် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့ စည်းပုံမူကြမ်းရေးဆွဲ သည့် အတွေ့ အကြုံရှိနေခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ မဒတ ဟု ခေါ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု တွင်ပါဝင်သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက် တစ်တပ်ဦးအပါအ၀င် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရှိ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် ပေါင်းကာ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရက်တစ် မဟာ မိတ်အဖွဲ့ ချုပ် (ဒီအေဘီ) ကို ဖွဲ့ စည်းခဲ့ကြပြီးနောက် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်း ရေးဆွဲရေး ကော်မတီတရပ်အား ဖွဲ့ စည်းဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။ လေးနှစ်ခန့် ကြာပြီးနောက်တွင် ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ပြည် ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိ၊ မူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီအားတိုးချဲ့ 
ဖွဲ့စည်းကာ ဖွဲ့ စည်းပုံမူကြမ်းအား တဆင့်ပြီးတဆင့် တနှစ်ပြီးတနှစ် ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင် အချောသတ်လာခဲ့သည်။ စာရေးသူသိသမျှ နောက်ဆုံး ကမကထ ပြု၍ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးများ ကျင်းပကာ ပြုစုရေးဆွဲခဲ့သည့် ကော်မတီမှာ ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့ စည်းပုံ (မူကြမ်း) ရေးဆွဲရေး နှင့် ညှိနိုင်းရေးကော်မတီ (FCDCC) ဖြစ်သည်။
၁၇ နှစ်တာ စုပေါင်းကြိုးပမ်းခဲ့မှု၏ ရလာဒ်အနေဖြင့် ယင်းကော်မတီမှ နေ၍ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အများ ပြည်သူလေ့လာခွင့်ရစေရန် ပုံနှိပ်ဖြန့် ဝေခဲ့သည့် ဖွဲ့ စည်းပုံ (ပထမ မူကြမ်း) အား ဤ လင့်ခ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ယခုနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားညီလာခံကြီးမှနေ၍ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအသစ်တရပ် ရေးဆွဲသွားမည် ဟူသည်မှာ အထက်ပါ ဖွဲ့ စည်းပုံ (ပထမမူကြမ်း) အား ဆက်လက်မွမ်းမံ ပြင်ဆင် သွားမည်လား၊ နောက်ထပ် အသစ်တရပ်ကို ရေးဆွဲသွားမည်လား မပြောနိုင်ပါ။ သို့ ရာတွင် စစ်အာဏာရှင်အဆက် ဆက်က ဖွဲ့ စည်းပုံရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား ထိမ်းချုပ်ကာ ၄င်းတို့ အလိုကျ ရေးဆွဲစေခဲ့ ခြင်းမျိုး ကဲ့ သို့ မဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ အခြေခံလူထုကြီးတရပ်လုံး ပါဝင်ခွင့်ရစေမည့် လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးဖြင့် ဖေါ်ဆောင်လိမ့်မည် ဟု မြှော်လင့်ရ သည်။
ဥပဒေရေးရာ၊ နိုင်ငံရေးအရ ချိန်ကိုက်မှု နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်တက်ကာ ဥပဒေပြဌာန်းသည့် လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နေခြင်းမှာ တိုင်းရင်း သား အခွင့်အရေးများအားကာကွယ်နိုင်မည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာ
ရန် လုပ်ဆောင်နိုင်ဘို့ ဝေးစွ။ သတင်းမီဒီယာများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်အပါအ၀င် လူထု၏ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့် နှင့် ဒီမို ကရေစီ အခွင့်အရေးများအားအကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့် ဥပဒေများ ပေါ်ထွက်လာစေရန်ပင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း ပွင့်လင်းစွာသုံးသပ်ရပါမည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လမ်းကြောင်း၊ ၄င်း အရ တည်ထောင်ထားသည့် ဥပဒေဘောင်၊ နှင့် တိုင်းပြည်အဆောက်အအုံများအတွင်းဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေသမျှကာလပတ်လုံး စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံတွင် တိုင်းရင်းသားများ၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် နှင့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတိုင်း၏ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေးများအား ကာကွယ်ဖေါ်ဆောင်နိုင်မည့် ဥပဒေအုတ်မြစ် ချမှတ်ရန် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယင်း သို့ မချမှတ်နိုင်သမျှ ကာလပတ်လုံး စစ်မှန်သည့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလည်း မည်သည့်အခါမျှ ရမည် မဟုတ်သော
ကြောင့် တိုင်းပြည်နှင့် လူထု၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမှာလည်း အိပ်မက်ပမာသာ ဖြစ်နေပါမည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလ (၂) ရက်နေ့ ၌ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းက တိုင်းရင်းသားများလိုလားသည့် ဖက်ဒရယ်ကိုဖေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင် အတွင်း တွင် ဖက်ဒရယ် ဥပဒေမူကြမ်းတခုရေးဆွဲရန် ဦးတီခွန် မြတ် နှင့် ဒေါ်နန်းဝါနု တို့ အားတာဝန်ပေးအပ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားများ လိုလားသည့် ဖက်ဒရယ် သည် ပေးအပ်သင့်သော နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဖြစ်သည် ဟု လက်ခံ လာပြီဖြစ်သော်လည်း စစ်အာဏာရှင် ဟောင်းသစ် များသည် နောက်ထပ် ဥပဒေမျက်လှည့်တမျိုး ပြသရန် စီမံ နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နားမယောင် သင့်ပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းပုံမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆိုးဝါးဆုံးဖွဲ့ စည်းပုံဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ယင်း အခြေခံတွင် တည်ဆောက်မည် ဟူသည်မှာ အမြင်မတော် ဆင်တော်နှင့် ခလောက် ဖြစ်ရုံသာမက ပတ္တမြားကို ယိုအိမ်သာထဲတွင် ထိမ်းသိမ်းထားရှိရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းသာဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအရ သမတ ဖြစ်လာနိုးနှင့် မြှော်လင့်ချက်ပေးထားခံရသည့် အခြေအနေမှ နိုးထသင့်ပါပြီ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တွင် လက်ရှိ စိုင်းမောက်ခမ်းကဲ့ သို့ ဘာမှ အခွင့်အာဏာ မရှိသည့် ဒုသမ္မတနေရာမျိုးနှင့် မိမိကိုယ်တိုင်ချောင်ထိုးခံထားရရုံသာမက တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလူထုကြီးတရပ်လုံး စစ် အာဏာရှင်စနစ်၏ ကျေးကျွန်များဖြစ်ကျန်စေမည့်အခြေအနေမျိုးကို တွန်းပို့ မထားသင့်ပါ။ ယခုအချိန်တွင် လွှတ် တော် မှ ပြတ်ပြတ်သားသားကျောခိုင်းထွက်ခွာကာ တိုင်းရင်းသားများ၊ အခြေခံလူထုများနှင့် နိုင်ငံတကာ တို့ ၏ ထောက် ခံမှု ကို ရယူလျှက် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သစ် တရပ် ပေါ်ပေါက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အတူပါဝင် ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖေါ်သင့်ပြီဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ဖြစ်ပါက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (ပထမ မူကြမ်း) တွင် ၀န်ကြီးချုပ်စနစ် ကျင့်သုံးထားသည်ကို ရည်ညွှန်းလျှင် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသစ်၌ ပထမဆုံး ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ် သင့်သူမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ဖြစ်ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းမည့်သူများတွင် စာရေးသူကိုယ် တိုင်လည်း ပါဝင်ရန် အသင့်ရှိပါမည်။
ဦးအောင်ထူး (ရှေ့ နေ)
ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက် တည်ထောင်သူ နေ့ စွဲ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၅
Posted by PKD at 2:48 AM
BGF Day (20/08/2013)
ဗမာလယ်သမားတွေအတွက် ထောင်ကျခံခဲ့တဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသ...
" KNDO ဦးစီးချုပ်အသစ် ဗိုလ်မှူးကြီးနယ်ဒါးမြ "
လူဦးရေစာရင်း အမှန်ရရှိရေး ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ ကြိုးပမ...
နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ်ကျန်းမာရေးလုပ်သားအဖွဲ့(၆)ကြိ...
လက်ရှိ KNU ခေါင်းဆောင်များအား အသိပေး အကြံပြုခြင်း
UNFC နည်းပညာ အဖွဲ့နှင့် အစိုးရ နည်းပညာ အဖွဲ့ ဆွေးေ...
ထိုင်းနယ်စပ် မြန်မာဒုက္ခသည်အချို့နေရပ်ပြန်ပို့ဖို့ ...
လိပ်ခဲတင်းလင်းဖြစ်နေသော KNU တောင်ငူ ဆက်ဆံရေးရုံး ထ...
သြစတျေးလျနိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့ကရင့်ရိုးရာ ချည်ြ...
Riposte to Article in EBO Briefing Paper No. 8, da...
ှကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင်များအတွက် မေးခွန်းများ
ဗမာစစ်တပ်နှင့် BGF တပ်များ ဖာဖွန်ခရိုင်တွင်းစစ်ရေး...
နယ်ခြားစောင့်တပ်အမှတ်(၁၀၁၄) ဗိုလ်မောင်ချစ်မှ ၀ဲကြီ...
မြ၀တီမြို့နယ်ရှိ ဘလဲ့ကဆောရွာ ဒေသခံကျွဲ ၄ကောင်ကိုြ...
မြန်မာနိုင်ငံက လူတစ်သိန်းမှာ ၅၂၅ ယောက် တီဘီရောဂါ ခ...
ကရင့်ရိုးရာ ခြည်ဖြူပွဲ (နယူးယောက်မြို့ )
KNLA တပ်ရင်း (၁၀၂) တပ်ခွဲ(၄)နှင့် BGF တပ်ရင်း(၁၀၁၃...
ဖယ်ဒရယ်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာကိစ္စ ဆန္ဒနဲ့ဘဝကိုက်ည...
ကရင့်ရိုးရာ လက်ချီပွဲ အခမ်းအနား (မြ၀တီမြို့ နယ်)
(၆၃)ကြိမ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား ( ထီးမူး...
(63) ကြိမ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား (မလေးရှ...
63rd Karen Martyrs' day (ရုပ်သံ)
စောဘဦးကြီးမူ (၄) ရပ် နှင့် KNU နိုင်ငံရေး လမ်းစဉ်...
ကရင့်အာဇာနည်များကို ဦးညွတ်အလေးပြုပါ၏ (ဖူးကီးဒို)
ဗိုလ်မှူး စောတူးဝေါ် ၏ ကရင့်တော်လှန်ရေး ဖြတ်သန်းမှု ...
ကရင်အာဇာနည်နေ့ သံတောင်တွင် နှစ် ၆၀ ကျော်အတွင်း ပထမ...
63 ကြိမ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့(မဲလ်ဘုန်းမြို့ )
လယ်ယာမြေဥပဒေ ဆိုင်းငံ့ထားပေးရန် ကေအန်ယူပြော
(၆၃) ကြိမ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့ တွင်ပြောကြားသော ...
(၆၃) ကြိမ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့ တွင် ပြောကြားသော ...
HERO BLOOD - ကရင့်အာဇာနည်နေ့ အထူး တေးလက်ဆောင်
ထော် ကော်သူးလေ ထော်
ခေတ်မီနေဆဲ ကရင့်အာဇာနည်ကြီးရဲ့ မူ (၄) ချက်
၆၃ နှစ်မြောက် ကရင်အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို ဖို့ဝိန်...
ကေအဲန်ယူဥက္ကဌ၏ (၆၃)နှစ်မြောက် ကရင်အမျိူးသားအာဇာနည်ေ...
လေဆန်လမ်းရဲ့စည်းဝါးခတ်သံပြဇာတ် (8888 ရှစ်လေးလုံးငေ...
"ကရင့်အာဇာနည်များနေ့ မှတ်တမ်း သီချင်း"
"ကရင့်အာဇာနည်များနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ" - (၆၃)နှစ်မြော...
ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ သစ်တောများကို ဒီကေဘီအေ အကွက် ...
နော်ဝေနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ ကရင်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းမ...
(၆၃)နှစ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်များနေ့တေးလက်ဆောင်
မယ်နီစိုးတားပြည်နယ် စိန်ပေါလ်မြို့ ကျင်းပသည့် (၆၃)...
ဖူးစောဒူးပြန်လည်ပြောပြသော ကရင်အာဇာနည်နေ့ ဖြစ်ပေါ်လာ...
စစ်ရေး သတိရှိကြရန် KNPP၏ တပ်မှူး ညီလာခံက တပ်လှန့်
၆၃ နှစ်ပြည့် ကရင်အာဇာနည်နေ့ ဂုဏ်ပြုကဗျာများ (သြစတေ...
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို လွတ်တော်မှာ ပြင်ဆင်နေမယ့် အစာ...
Interview Video Ethnic alliance hammers out ‘feder...
ယမ်းငွေ့ ဝေဆဲ ကရင့်နယ်မြေ (ရုပ်သံ)
စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းပုံအ...
ဖာဖွန်ခရိုင်တွင် ဗမာစစ်တပ် အဆက်မပြတ်အင်အားဖြည့်တင်...
ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိ သွားလာနေသည့် ဒေသခံ ယာဉ်များကို...